Nhau - makiyi ekunze nemakiyi emukati
Isu tese tinoziva kuti makiyi emota anoita basa rakakosha kana mota ichida kumhanya munzira. Naizvozvo, kiyi yemotokari yakakosha kwazvo kumotokari. Chero bedzi shamwari ine mota mumhuri iine kiyi yemota, kunyangwe uri mota yemagetsi, mota kana bhasikoro, kune akawanda marudzi emakiyi atinoona, yega yega kiyi vese vane maitiro avo, uye nzira nemichina yatinoenda kuchitoro chekiyi zvakasiyana. Saka ndoupi mutsauko pakati pavo? Ngatitangei neyekugadzira maitiro ekiyi yeplata (kana paine musimboti wekuvhara mota Kana iwe usinganzwisise, ndinokukurudzira kuti uverenge chinyorwa chinotevera: Shrapnel lock classification of car locks). Tinoziva kuti makiyi anogadzirwa nemaraki akasiyana anoita kuti makiyi ave nemhando nhatu: kugaya zvakapfava, kugaya kwekunze, uye kugaya kwemukati. Aya marudzi matatu ari Iyo Inoumbwa neye organic musanganiswa weyakavhara chidimbu mukiyi. Izvi zvisati zvaitika, ini ndichaisa rondedzero kune wese munhu, ndiko kuti, yakakosha nzira, ndeipi kiyi track, inoreva kusanganiswa kwenzvimbo chaiyo yekushandira yekiyi yakaiswa mukirinda yakakiya.
Automobile mechanical kiyi kupatsanura
Kutanga: Flat azvikuya imwe track
Iyo yakapfava yekugaya imwechete-track kiyi inoreva kune yakatsetseka yekugaya kiyi ine chete track imwe inoshanda. (PS: Kana paine matiraki maviri pane kiyi asi sekureba seimwe track iri kushanda, inonzi flat milling single track) Kazhinji, makiyi emota diki dzemagetsi, makabati edhirowa, uye masimbi ehabhineti kiyi ndeiyi kiyi, sezvinotevera Mufananidzo unoratidza:
Mota mehendi kiyi kupatsanura, mota kiyi kupatsanura mifananidzo
Mota yemagetsi kiyi kupatsanura, mota kiyi kupatsanura mifananidzo
Chechipiri: gorofa kugaya maturu maviri
Iwo maviri-njanji akapfava azvikuya kiyi inoreva yakatsetseka azvikuya kiyi umo matraki ese epatafura ekugaya kiyi anoshanda panguva imwe chete. Kazhinji, rudzi urwu rwemakiyi akakosha anowanikwa mumidhudhudhu, maveni, marori, marori, Buick Excelle, Kia K2, Toyota Vios, mota zhinji dzeNissan, uye mazhinji emota dzepamba dziri pasi pe100,000 yuan ndidzo dzese idzi kiyi. , Sezvinoratidzwa pazasi:
Chechitatu: mukati mekugaya maturu maviri
Yemukati yekugaya maviri-track kiyi zvinoreva kuti ma trajectories maviri eiyo yemukati yekugaya kiyi ari kushanda, uye mamwe ma trajectori haasi kushanda. Kazhinji, kiyi yerudzi urwu inoshandiswa mumota diki dzemagetsi emagetsi, maC-level masirinda eanodzivirira kuba, uye mazhinji eVolkswagen, Audi, uye BMW makiyi makiyi erudzi urwu rwechizarira. Mufananidzo wakatarwa unoratidzwa mumufananidzo unotevera:
Chechina: Chechina-track yemukati yekugaya
Iyo yemukati yekugaya ina-track kiyi inoreva yekunze yekugaya kiyi mairi mativi mana eiyo yemukati yekugaya kiyi ari kushanda. Kazhinji, kiyi yerudzi urwu inowanikwa muToyota Crown, uye dzimwe mota dzamazuvano, Lexus, nezvimwewo mhando iyi yekiyi, kiyi inoratidzwa mumufananidzo unotevera: